ह्यास तेलको स्वास्थ्य लाभ - Victor Mochere
ह्यास तेलको स्वास्थ्य लाभहरू
by क्याथी डी
ह्यास तेल, महको तेल र भांगको तेल पनि भनिन्छ, ठूलो मात्रामा THC भएको भांगको निकासी हो। यो थोरै वा कुनै साइड इफेक्ट बिना धेरै स्वास्थ्य समस्याहरूको लागि एक उपचार हो, र स्वास्थ्य अधिकारीहरूले यसको प्रयोग सिफारिस गर्छन्। यद्यपि, धेरै देशहरूले यसलाई गैरकानूनी मान्छन्, यसको स्वास्थ्य लाभको बाबजुद। नतिजाको रूपमा, केहि मानिसहरू अझै पनि ह्यास तेल र यसका विभिन्न फाइदाहरू बारे अनभिज्ञ छन्। यस लेखले ह्यास तेलको स्वास्थ्य लाभहरूको बारेमा छलफल गर्दछ।
ह्यास तेल के हो?
ह्यास तेलको फाइदाहरू
ह्यास तेल CBD र ठूलो मात्रामा THC भएको भांगको केन्द्रित निकासी हो। मानिसहरूले यसलाई भांगको तेल वा महको तेलको रूपमा पनि बुझाउँछन्, र यो मुख्य रूपमा सुनौलो वा हल्का खैरो हुन्छ। यद्यपि ह्यास तेलले अन्य भांग उत्पादनहरू जस्तै फाइदाहरू छन्, यो सबैभन्दा शक्तिशाली छ किनभने यसमा लगभग 90% THC हुन्छ। त्यहाँ धेरै ह्यास तेल निकासी विधिहरू छन्; यद्यपि, धेरै जसो विलायक समावेश गर्दछ।
यी सॉल्भेन्टहरू मध्ये केही इथेनॉल र ब्यूटेन समावेश छन्। यद्यपि, यसको तयारी यसको उत्पादन शैलीमा मात्र निर्भर गर्दछ। ह्यास तेल खरिद गर्नु अघि, तपाईको क्षेत्रमा यसको वैधानिकता जाँच गर्नु उत्तम हुन्छ। तपाईं ह्यास तेल चाट, धुम्रपान, वा भाप गरेर उपभोग गर्न सक्नुहुन्छ। साथै, तपाइँ विशेष छाला अवस्थाहरूको लागि छालामा रगड्न सक्नुहुन्छ।
यहाँ ह्यास तेलको स्वास्थ्य लाभहरू छन्।
1. यसले दुखाइ कम गर्छ
भांगको तेल धेरैजसो घरपरिवारमा दुखाइको लागि जाने जडीबुटी हो किनभने यसले तुरुन्तै दुखाइ कम गर्छ। विभिन्न अध्ययनहरूले न्यूरोपैथिक दुखाइको उपचारमा तेलको दक्षता प्रमाणित गरेको छ। तपाईलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ कि भांगको तेलले दुखाइको लागि कसरी काम गर्दछ। सबैसँग एन्डोकानाबिनोइड प्रणाली हुन्छ जसले मूड, दुखाइको अनुभूति र भोकसँग सम्बन्धित छ। भांगको तेलले मस्तिष्क र प्रतिरक्षा प्रणालीमा एन्डोकानाबिनोइड रिसेप्टर्ससँग अन्तरक्रिया गर्छ। यी रिसेप्टरहरूले संकेतहरू प्राप्त गर्छन् र कोशिकाहरूलाई प्रतिक्रिया दिन मद्दत गर्छन्, पीडा-निवारक प्रभाव सिर्जना गर्दछ।
2. ह्यासको तेलले चिन्ता कम गर्छ
ह्यास तेल यसको आरामदायी गुणहरूको कारण चिन्ता कम गर्नको लागि प्रसिद्ध छ। यसमा केही प्राकृतिक यौगिकहरू हुन्छन् जसले हार्मोनहरू निस्कन्छ जसले सन्तोषजनक अनुभूति दिन्छ। यी यौगिकहरू मध्ये एक THC हो, जसले आराम गर्न मद्दत गर्दछ। त्यसोभए, ह्यास तेल चिन्ता, अनिद्रा, र PTSD लक्षणहरूको लागि उत्कृष्ट जडीबुटी हो। अनुसन्धानले भांगको तेल प्रयोग गरेपछि कम चिन्ताका लक्षणहरू देखाएको छ, र मुटुको धड्कनमा ठूलो कमी र अन्य महत्त्वपूर्ण चिन्ताका लक्षणहरू।
3. यसले मुटुको अवस्था सुधार गर्छ
यद्यपि भांगको तेलले हृदयघातलाई निको गर्दैन, यसले हृदयलाई क्षति हुनबाट रोक्छ। यसको एन्टी-इन्फ्लेमेटरी गुणहरूको कारण, ह्यासको तेलले रक्तचाप र कोलेस्ट्रोल कम गर्छ। तसर्थ, हामी स्वस्थ वजन कायम राख्न र स्वस्थ जीवन बिताउन सक्छौं। साथै, ह्यास तेलमा एन्टिअक्सिडेन्ट गुणहरू छन् जसले विशिष्ट स्वास्थ्य समस्याहरूको उपचार गर्न मद्दत गर्दछ।
धेरै अध्ययनहरूले देखाएको छ कि यो तेलले हृदयघात र स्ट्रोकलाई रोक्छ, र त्यो भांगले राम्रो परिसंचरणको लागि रक्त नलीहरूलाई आराम र फैलाउँछ। तर, यो जान्न आवश्यक छ कि प्रत्येक औषधिले भांगसँग राम्रोसँग काम गर्दैन। त्यसोभए, यदि तपाईं भांगको तेल प्रयोग गर्नु अघि अन्य औषधिहरूमा हुनुहुन्छ भने आफ्नो डाक्टरसँग परामर्श लिनु राम्रो हुन्छ।
4. ह्यास तेलले निश्चित क्यान्सरहरूको उपचार गर्दछ
क्यान्सर सबैभन्दा विनाशकारी रोगहरू मध्ये एक हो, थोरै वा कुनै उपचार छैन। यद्यपि, वैज्ञानिकहरूले प्रमाणित गरेका छन् कि भांगले क्यान्सर कोशिकाहरूको वृद्धिलाई रोक्न सक्छ। CBD ले प्रयोगशालामा सकारात्मक प्रभाव देखाएको छ। क्यानाबिसको तेलले क्यान्सर कोशिकाहरूले कसरी प्रजनन गर्छ र सूजन कम गर्छ परिवर्तन गर्न सक्छ। यहाँ क्यान्सरमा भांगको तेलको आशाजनक प्रभावहरूको सूची छ।
भांगको तेलले क्यान्सर कोशिका विभाजनलाई रोक्छ
यसले क्यान्सरका कोशिकाहरूको मृत्युलाई ट्रिगर गर्छ
साथै, यसले रक्त नलीहरूलाई ट्यूमरमा बढ्नबाट रोक्छ
अन्तमा, यसले कोशिकाहरूलाई सम्पूर्ण शरीरमा फैलिनबाट रोक्छ
यी सबै महत्त्वपूर्ण प्रमाण हुन् कि भांगले निकट भविष्यमा क्यान्सर उपचारलाई असर गर्छ।
5. यसले केहि छाला अवस्थाहरूको उपचार गर्दछ
क्यानाबिस तेल पनि मुँहासे जस्तै केहि छाला अवस्था को उपचार को लागी प्रसिद्ध छ। यसको एन्टी-इन्फ्लेमेटरी गुणहरूले मुँहासे, खुजली र सुख्खापनको उपचार गर्न मद्दत गर्दछ, कुनै दाग छोड्दैन। तपाइँ यसलाई प्रभावित क्षेत्रमा रगड्न सक्नुहुन्छ वा शीर्ष रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जे होस्, यसले छालाका पुराना कोशिकाहरू हटाएर नयाँ छालाका कोशिकाहरूलाई प्रतिस्थापन गरेर स्वस्थ छालालाई प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्छ। साथै, भांगमा एन्टिब्याक्टेरियल र एन्टिफंगल गुणहरू छन्। त्यसैले, यसले छालाको कुनै पनि संक्रमणलाई निको पार्छ।
ह्यासको तेलमा धेरै स्वास्थ्य लाभहरू छन्। यदि तपाइँ यी सूचीबद्ध अवस्थाहरूबाट पीडित हुनुहुन्छ भने, ह्यास तेल अन्तिम समाधान हुन सक्छ। यद्यपि, तपाइँको क्षेत्रले यसलाई प्रयोग गर्नु अघि भांगलाई कानूनी उत्पादनको रूपमा विचार गर्नुपर्दछ। साथै, ह्यास तेलको प्रयोगले तपाईंलाई कुनै हानि गर्दैन कि भनेर जान्नको लागि आफ्नो डाक्टरलाई भेट्नुहोस्।
कसरी एक kratom व्यापार सुरु गर्न
कसरी एक उमेर प्रमाण जीवन बाँच्न